Ciidanka Yugaandha oo gacanta u geliyay xero argagixisada kadibna eedeeyay ciidanka xooga - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ciidanka Yugaandha oo gacanta u geliyay xero argagixisada kadibna eedeeyay ciidanka xooga
Ayadoo dawlada Somaliya aad ugu dadaalayso inay dalka saarto ciidanka Afrikaanka ee dhaafay xilligoodii, ayaa ciidanka Yugaandha ee ka mida Amisom lagu eedeeyay inay baneeyeen xero kadibna sidaas ay ku timi argagixisadu.
”Xerada Amisom banaysay waxay ku taala gobolka Shabeelaha hoose, waxayna ka baxeen oo taangiyada la baxeen ayadoo ayna joogin ciidanka xooga dalka, halkaasna waxa kuu muuqatey ujeedo gaara ayuu yiri korneyl Xasan.
”Ciidanka xooga lama ogola inuu xoogeysto, hubka loo ogolyahayna wa kan argagixisadu haysato, marka laba isku awooda maxay iska qaadi karaan, keliya waxay rabaan kooxda beesjha caalamka ee dalkan ku naaxday inay weligood joogaan ayuu yiri Cali Calasow.
Gudoomiyaha shabeelaha hoose ayaa isna sheegay in markii Yugaandheyskula baxayeen taangiyada in ciidaka xoogu joogin goobta. ”Waxay samaysanayaan qiil ah ciidankan Somaliyeed welli diyaar maaha si ay u dheeraystaan joogitaankooda.
”Cidna kama qarsoona inayna rabin in ciidanku dhismo dhawaana waa ogeyn inay qabiileeyeen ciidanka si qayb ka mida u nijaaseeyaan halkaasna ciidanku kala aamin baxo ayuu yiri Xuseen Warsame.